ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Tue, 06/25/2019 - 07:04 -- adminDep
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံး၏ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ